ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा
Home बिचार ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा
By पुष्करराज प्रसाईं
यसपाला पनि हामीले ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनायौं । यसपटक सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउँदा दसैं खल्लो भएको गुनासोका गरेका ज्येष्ठ नागरिकको तिहार सुखमय रहोस् । हाम्रो कानुनी व्यवस्थाअनुसार विशेषत ६० वर्षमाथिका उमेर समूहलाई ज्येष्ठ नागरिक भनिन्छ । वर्ण, लिंग, वर्ग, जाति र शारीरिक अवस्थालाई मध्यनजर नगरी उमेर समूहका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकको दर्जा दिने हाम्रो कानुनी व्यवस्था हो । ‘आगो ताप्नु मुढाको, कुरो सुन्नु बूढाको भन्ने’ सामाजिक उखान टुक्का हामीले सुन्दै आएका छौं । यसबाट वृद्धवृद्धाले आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा भोगेका आर्जन गरेका ज्ञान, सीप, अनुभव हाम्रा लागि अति उपयोगी हुने तथ्य अकाट्य सत्य हो । त्यसो हुनाले पुर्खाको भोगाइ सुन्नु र उपदेश ग्रहण गर्नु सन्ततिको बुद्धिमानी हो भने वृवृद्धाको सामाजिक सुरक्षाको राम्रो व्यवस्थापन गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन परिवार समाज र राष्ट्रप्रति समर्पण गरेको हुदाँ परिवार समाज राष्ट्रले पनि उनीहरूको आदर सम्मान गर्नै दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । यस आधारमा वृद्धवृद्धा भनेका हाम्रो समाजका अभिभावक, ज्ञान र विवेक हुन् ।
हाम्रो संविधान को धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हकको व्यवस्था छ । जसमा ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने प्रबन्ध गरियको छ । त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ को प्रस्तावनामा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, निजमा रहेका ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गर्ने तथा निजप्रति आदर श्रद्धा र सद्भावको अभिवृद्धि गर्ने सुनिश्चित गरिएको छ । यही संविधान र ऐनको भावना र मर्मअनुरूप काम गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय बनेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७२ ले दलित को ६० वर्ष उमेर र अन्यका हकमा ७० वर्ष उमेर पूरा गरेकालाई सामाजिक भत्ता मासिक ३ हजार पाउने व्यवस्था भयकाले केही राहत भने अवश्य भएको छ । २०५१ सालमा स्व. मनमोहन अधिकारीको कार्यकालमा वृद्धभत्ता दिन सुरु गरिएको यो कार्यक्रम लोकप्रिय भएकाले यसले निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।
त्यस्तैगरी, यातायात र स्वास्थ्यमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था पाइन्छ । उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतले उक्त छुटको कानुनी कार्यन्वयनका लागि सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारीसमेत भइसकेको अवस्था छ । तर, त्यसमा चाहिँ अझै पनि पूर्ण कार्यन्वयन हुन सकिरहेको छैन । त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन मा ६५ वर्षभन्दा माथिका ७० वर्ष उमेर पूरा गरेकालाई २५ प्रतिशत, ७० देखि ७५ वर्ष माथिकालाई ५० प्रतिशत छुट, ७५ वर्षभन्दा माथिकालाई ७५ प्रतिशत दण्ड सजायमा कैद छुट मिनाहा दिन सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसरी संविधान ऐन कानुन नियमले विभिन्न व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यन्वयनको पाटो भने कमजोर नै छ ।
ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन परिवार समाज र राष्ट्रप्रति समर्पण गरेको हुँदा परिवार समाज राष्ट्रले पनि उनीहरूको आदर सम्मान गर्ने मान्यता रहिआएको छ
त्यसैले, यदि राज्यले आफूलाई लोककल्याणकारी राज्यको रूपमा पहिचान बनाउने हो भने प्रत्यक वृद्धवृद्धाको अनुभव र क्रियाशीलताको आधारमा अवसर सिर्जना गर्ने र समयसापेक्ष उमेर क्याटागोरीको आधारमा वृद्धभत्ता प्रदान गर्ने र निःशुल्क १ लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा उपलव्ध गराउने घोषणालाई तुरुन्त कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक समाजका गहना हुन् भन्ने मान्यतालाई आत्मासात गरेर सामथ्र्यमा आधारित रोजगार सिर्जना गर्ने र योगदानमा आधारित सेवासुविधा राज्यले उपलब्ध गराउने, सीप दक्षतालाई मध्यनजर गरेर सोहीअनुसारको अवसर निरन्तर कायम गर्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने वृद्धवृद्धा वृद्धाश्रममा रोएर बाँच्नुपर्ने अवस्था आउनेछैन । ज्येष्ठ नागरिकको हक–अधिकारका लागि अरू विदेशमा गरिएको व्यवस्थापनतर्फ हेर्दा स्विजरल्यान्ड पहिलो, नर्वे दोस्रो, जर्मनी तेस्रो स्थानमा देखिन्छ भने नेपाल भने १७औं स्थानमा छ ।
पितृ देवो भवः भन्ने मुलुक नेपालका लागि यो स्थानमा पुग्नु दुःखद पक्ष हो । हामीले यस अवस्थाबाट माथि उक्लने पहल गर्नु जरुरी भइसकेको छ । यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय पहल पनि भइरहेको छ । ज्येष्ठ नागरिक अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्कमा हालै दसौं समूहले संयुक्त राष्ट्रसंघको निम्ति ज्येष्ठ नागरिकको हक–अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको औचित्य छ कि छैन भनेर निष्कर्ष निकाल्न घचघच्याएको थियो । अब हामीले अन्य महासन्धिले यससम्बन्धी सम्बोधन गर्छ गर्र्दैन भन्ने कुरालाई प्रस्ट पार्दै यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा उठाएर विश्वको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्नै बेला आएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस नेपालमा असल शासनका कुरा
हालसम्म ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा कुनै पनि विश्वव्यापी घोषणापत्र वा महासन्धि भएको छैन । त्यसैले गर्दा राष्ट्रहरू ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दामा बाध्यात्मक कानुनका रूपमा लागू गर्न उदासीन देखिन्छन् । यसरी समाज परिवर्तनप्रति उदासीन रहनु जनताको लागि परिवर्तित शासन प्रणाली भनेको लोकतान्त्रिक लोककल्याणकारी राज्यका लागि सुहाउने कुरा होइन । परिवर्तनको सन्दर्भमा चाल्र्स डार्विनले ‘जुनसुकै महान्भन्दा महान् कामका लागि हामीबाटै सुरु हुन सक्तछ । तर, आवश्यकता त्यसप्रतिको पूर्ण समर्पण हो’ भनेका छन् । अहिले वृद्धवृद्धाको सेवासुविधामा ध्यान दिनु भनेको सानोतिनो कार्य अवश्य होइन । समग्र समाजलाई सुरक्षित गराउनु हो आफंैलाई सुरक्षित गराउनु हो । भोलि हामी त्यही स्थितिमा पुग्ने कुरा निश्चित छ । यसको संख्या समाजमा ठूलो भइसकेको र अझ बढ्दो क्रममा छ ।
लोककल्याणकारी राज्यको रूपमा पहिचान बनाउने हो भने राज्यले प्रत्येक वृद्धवृद्धाको अनुभव र क्रियाशीलताको आधारमा अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ
विश्वमा रहेको ज्येष्ठ नागरिकको संख्या हेर्ने हो भने संयुक्त राष्ट्रसंघको जनसंख्या विभागको तथ्यांकअनुसार विश्वको जनसंख्याको १३ंंः५ प्रतिशत भन्दामाथि देखिन्छ । विश्वमा रहेको वृद्धको जनसंख्या बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । भनिन्छ प्रतिसेकेन्ड दुई जना ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो ६०औं जन्मदिन मनाइरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा अबको सन्् २०५० पछि विश्वको कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकको संख्या हुने प्रक्षेपण गरिएको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा २०६८ को जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको ८.१३ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकको संख्या रहेको देखिन्छ । अबको २०७८ सालसम्ममा नेपालको कुल जनसंख्याको लगभग १२ प्रतिशतभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसो हुुनुको कारणमा पछिल्लो समय नेपालीकोे औसत आयु बढ्नु, बाल मृत्युदर घट्नु र साथै यातायात पूर्वाधारको विकासले शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच पुग्नुलाई लिइएको पाइन्छ ।
यसरी, ज्येष्ठ नागरिकको संख्या वृद्धि हुनु तर घरमा रहेका अन्य परिवार सदस्यको पेसा व्यवसायको व्यस्तता हुनुको कारणले घरमा वृद्धवृद्धाको स्याहारसम्भार भइरहेको अवस्था छैन । वृद्धहरूमा खान लगाउन बस्नभन्दा पनि आफूसँग आफ्ना भनाउँदाहरू नजिकै बसिदिऊन्, आफ्ना कुरा सुनिदिऊन्, रित्तो हात नआई सानै थोरै भए पनि केही ल्याई हातमा राखिदिऊन भन्ने भावनात्मक भोका तथा इच्छा रहने गरेको तथ्य सोसम्बन्धी अध्ययनबाट देखिएको छ । यसका लागि बच्चाका लागि हेरचाह केन्द्र खोलिएजस्तै वृद्धवृद्धाको पर्याप्त दिवा सेवा केन्द्र तुरुन्त खोलिनु अनिवार्य देखिन्छ । यसको अभावले सहरी क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक पट्यारलाग्दो निराश, उराठिलो जीवन जिउन बाध्य छन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्दछ । यसका लागि ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक चौतारी ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम निःशुल्क सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।
हाम्रो समाज आफूभन्दा ठूलालाई सम्मान र सानालाई माया गर्नै समाज हो र हाम्रो धर्म परम्परा सांस्कृतिक र व्यवहारले ज्येष्ठ नागरिकप्रति कर्तव्य पालन गर्न सिकाएको छ । साथै, जुनसुकै धर्मले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्य र समाजले दिनुपर्ने सहयोगका साथै सम्मानबारे निर्देश गरेको छ । हाम्रो समाज पूर्वीय दर्शनद्वारा निर्देशित छ । जुन दर्शनले वृद्ध र वृद्धालाई अत्यन्त उच्च सम्मान र सहयोग गर्न प्रेरित गर्दछ । तसर्थ यसअनुसार वृद्धवृद्धाको सरसहयोग गर्न सुखमय बनाउन राज्यले सरल सहज वातावरण बनाइदिनुपर्दछ । आफ्ना अग्रजप्रति उचित व्यवहार गर्न नसक्ने व्यक्ति समाज र राज्यलाई सम्मानका दृष्टिले हेर्न सकिँदैन । तसर्थ, सबैले ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा सोच्नैपर्दछ । हामीले जे उपयोग गरिरहेका छौं, अग्रजकै कारणले गरिरहेका छौं भन्ने ठान्नु हाम्रो नैतिक दायित्व हो ।
भागवत खनाल - January 15, 2021
गम्भीरबहादुर हाडा - January 15, 2021
खेल एजेन्सी - January 15, 2021
सडकबाट अदालतलाई प्रभावित नगरौं : देउवा
Breaking News गणेश गिरी - January 14, 2021
पर्वत । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतको निर्णय प्रक्रियामा सडकबाट प्रभावित गर्न नहुने बताएका छन् । पर्वतको शंकरपोखरीमा आयोजीत शहिद हरीदत्त तिवारीको १८...
श्रीमानले धर्म परिवर्तन गर्न यातना दिएकाे भन्दै ‘कृष्णदासी’कि नायिका प्रहरीमा
Not-to-be-missed एजेन्सी - January 9, 2021
एजेन्सी । चर्चित टेलिभिजन सिरियल ‘कृष्णदासी’ मा कि नायिका प्रिटी तलरेजाले आफ्ना श्रीमान अभिजित पेटकरविरुद्ध प्रहरीमा उजूरी दर्ता गराएकी छिन् । आफुमाथि धर्म परिवर्तनका...
विदेश एजेन्सी - January 15, 2021
एजेन्सी । इन्डोनेरियाको सुलावेसी द्वीपमा शुक्रबार बिहान ६.२ म्याग्नीच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । यस भूकम्पमा परी कम्तीमा ३४ व्यक्तिको मृत्यु भएको प्रारम्भिक जानकारी...
कोरोनाकाल लम्बिएपछि ‘वामअप’ गर्दै उद्योगहरु
Editor-Picks सरिता दाहाल - January 11, 2021
चुरे,मकवानपुर । विश्व्व्यापि रुपमा फैलिएको कोरोनाको कारण अस्तव्यस्त भएको मकवानपुर जिल्ला हेटौंडाका उद्योगहरु अब विस्तारै ‘वामअप’ गर्न थालेका छन् । लामो समय कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को...
बोलेरो दुर्घटनामा बेपत्ता भएका दुई जनामध्ये एकको शव भेटियो
सुरज श्रेष्ठ - May 21, 2020
काभ्रेपलाञ्चोक । बोलेरो दुर्घटनामा वेपत्ता भएका दुई जना युवामध्ये एकजनाको शव भेटिएको छ।
जिल्ला काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका वडा १ का भोला महतको शव भेटिएको जिल्ला...
रौतहटका कोरोना संक्रमित पुरुषको वीरगञ्जमा मृत्यु, थपिए ७९ संक्रमित
तुलसी भण्डारी - August 30, 2020
वीरगन्ज । पर्साको वीरगन्जमा उपचारका लागि ल्याएका रौतहटका एक पुरुषको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ । वीरगन्जको अस्थायी कोभिड अस्पताल गण्डकमा उपचार गराइरहेका ती...
क्वारेन्टिनमा बसेका २२ वर्षीय युवककाे मृत्यु
Breaking News भगीरथ भण्डारी - August 17, 2020
इलाम । इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको करफोक क्वारेन्टिन बसेका २२ बर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भएको छ । भारतको हैदराबादबाट आई साउन २६ गते देखि क्वारेन्टाईनमा बस्दै...
अभिनेत्री मनीषाको पक्षमा नेपाली चलचित्रकर्मी
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - May 22, 2020
काठमाडौं । नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साको समर्थनमा ट्वीट गरेकी अभिनेत्री मनीषा कोइरालामाथि विभिन्न आरोपसहित भारतीय मिडिया खनिएका छन् । नेपाली चलचित्रकर्मी तथा संगीतकर्मीले...
कोरोना संक्रमित युवकको सम्पर्कमा रहेका ३० जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ
प्रदेश ७ सीपी लोहिया - June 4, 2020
बैतडी । बैतडीको पाटन नगरपालिका ८ का ३१ बर्षीय कोरोना संक्रमित युवकको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका ३० जनाको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । पाटन...
कविता : भो नसुत डा. केसी !
सौजन्य लिला बल्लभ नेपाल - October 1, 2020
भ्रष्टाचारी, तस्करको अखडामा निशास्सिएको शहरमा निर्दालाई मुर्दा बनाएर कुटिन्छ यहाँ, के गर्छौ र डा. केसी तिम्रा शरिरका रौ हरु पलपल गनि गनि लुटिन्छ यहाँ, तिमी नखाएर सुत्छौ त...
कलैया अस्पतालको लापरवाहीले शिशुको मृत्यु, सुत्केरीको अवस्था जटिल
Breaking News अजय साह - September 10, 2020
बारा । जिल्ला अस्पताल कलैयाको चरमलापरवाहिले सुत्केरीको बच्चा पेटमै मरेको पीडित पक्षले आरोप लगाएका छन् । बुधवार सुत्केरी व्याथा लागेर जिल्ला अस्पताल कलैयामा लिएर...
रुकुमपश्चिममा पहिराले घर बगाउँदा दुई जनाको मृत्यु
प्रदेश ६ रासस - July 28, 2020
रुकुमपश्चिम । रुकुमपश्चिममा पहिरोले घर बगाउँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको बाँफिकोट गाउँपालिका–९, स्यालाको एक घर गए राति पहिरोले बगाउँदा दुई जनाको...
अन्योलमै कांग्रेसः निर्णय एउटा, धारणा अर्कै
भर्खरै महेश्वर गौतम - January 12, 2021
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पुनस्र्थापनाको विषयलाई उठाउने कि निर्वाचनमा जाने भन्नेमा...
श्रीमानको हत्यापछि श्रीमतीले गरिन् आत्महत्या !
Breaking News राजधानी समाचारदाता - January 9, 2021
काठमाडौं । टोखामा श्रीमान–श्रीमती मृत अवस्थामा भेटिएका छन् । श्रीमती सुदिक्षा गिरी र श्रीमान् उमेश केसी मृत भेटिएका हुन् । ग्राण्डी अस्पताल नजिकको एक हाउजिङमा...
पिक्निक खान गएका सन्तोषको चप्पल भेटियो, मान्छे भेटिएनन्
भर्खरै राजधानी समाचारदाता - January 11, 2021
पोखरा । साथीहरुसंग बनभोज खान भन्दै फेवा किनारमा पुगेका सन्तोष परिवार बेपत्ता भएको २ दिन भयो । उनी कहाँ गए के गर्दैछन् केही पत्ता...
मधुजंग पाण्डे - January 11, 2021
२४ वर्षपछि पक्राउ परेका भैसी चोरी मुद्दाका अभियुक्त कारागार चलान
एम के माझी - January 11, 2021
प्रचण्ड स्वदेश फर्किए
रासस - January 9, 2021
धनकुटामा ट्याक्टरले किच्दा विद्यार्थीको मृत्यु
रबिन कटेल - January 10, 2021
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध बयलगाढा प्रदर्शन (फोटोफिचर)
सत्यन श्रेष्ठ - January 10, 2021
यो पनि पढ्नुहोस राजनीतिक आबद्धताको आरोपभित्रको राजनीति